हस्तमैथुन गर्नै पर्ने ५ कारण के हुन् त ?? - Indian Girls Nude XXX Images
हस्तमैथुन गर्नै पर्ने ५ कारण के हुन् त ??
हाँ हस्तमैथुन गर्नै पर्ने ५ कारण प्रस्तुत गरिएको छ
१.हस्तमैथुन स्वास्थको लागि फाइदजनक छ’
हस्तमैथुन स्वस्थ्य रहने एउटा गतिलो उपाय समेत हो। हस्तमैथुनका धेरै फाइदा छन्। यसले इनसोम्निया,तनाब, एनजाइटी, मेन्सट्रुअल क्र्याम्प, डिप्रेसन जस्ता रोगबाट पर राख्दछ। यसका अलावा हस्तमैथुनले प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ। केही अनुसन्धानकर्ताले यसलाइ राम्रो व्यायामको रुपमा समेत उल्लेख गर्ने गरेका छन् । यसले मनग्य क्यालोरी समेत घटाउँछ।
२. हस्तमैथुनले चरम आनन्द दिन्छ’
हस्तमैथुनले सेक्स झैं मानिसलाइ चर’म आनन्द दिन्छ। यसलेले मानिसलाई कल्पनाशिल बनाउँछ। हस्तमैथुनका क्रममा विभिन्न सेलेब्रेटिज, पर्नस्टार, अपरिचित सम्झिएर पनि आनन्द लिन सकिन्छ। यौन सन्तु्ष्टी हासिल गर्न पनि हस्तमैथुन पर्याप्त छ।
३.हस्तमैथुन सुरक्षित छ
हस्तमैथुन शतप्रतिशत सुरक्षित छ, तपाईले यसबाट गर्भवित हुने डर पाल्नु पर्देन् भने सुरुवा यौन रोग देखि एड्सबाट कत्ति डराउनु पर्देन् । हस्तमैथुनका लागि पैसा पर्देन।
४.हस्तमैथुन प्राकृतिक प्रक्रिया हो
हस्तमैथुन सामान्य र प्राकृतिक यौन क्रियाकलाप हो। यसका बारेमा रहेका नकारात्मक धारणाहरु भ्रम मात्रै हुन । हस्तमैथुनबाट निसन्तान हुने, कमजोर हुने र यौन उत्तेजना घट्ने कुरा भ्रम सिवाय केही होइनन्
५. हस्तमैथुनले सेक्सलाई सहयोग गर्दछ”
हस्तमैथुन आफैमा रोमाञ्चकारी अनुभव हो । यसले मानिसलाई सेक्सका बारेमा सिकाउँछ। हस्तमैथुनबाट तपाईले आफ्नो शरिरलाई चिन्न सक्नुहुन्छ भने सेक्सको क्षमता देखि तपाईलाई मन पर्ने यौन संवेदनाको आँकलन गर्न सक्नु हुन्छ ।”watch more videos and MMS scandai on INdiansexvdo.com
Share this:Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)	November 11, 2014 admin	Posted in Most Demanded, Nepali SEX Stories	Post Permalink
← छातीमा तेश्रो स्तन थपिन् २१ वर्षे युवतीले	साना स्तनलाई ठुलो बनउने तरिका !!! →